Mpianatry ny ENS andiany faha-6 Mihisatra ny fandraisana ho mpiasam-panjakana azy ireo
Nivoaka ny 15 Janoary lasa teo ny ny isan’ireo mpianatra ôfisialy nahavita fianarana andiany fahaenina tao amin’ny sekoly ambony manofana ho mpampianatra na ENS (Ecole Normale Supérieure) etsy Ampefiloha raisina ho mpiasam-panjakana.
INSCAE sy ny YALI Hanofana ireo mpandraharaha tanora sy madinika
Hanome fiofanana ireo tanora mpandraharaha sy ireo mpandraharaha faran’izay madinika eto amintsika ny sekoly ambony INSCAE etsy amin’ny 67 ha sy ny Yali, fikambanana tsy miankina iray izay manampy sy manohana ireo tanora Malagasy ho lasa mpitarika.
Seces Antananarivo “Mety ho sarotsarotra ny toe-draharaha”
Nanao fanambarana ny Seces sampana Antananarivo fa misaotra ny ray aman-dreny tamin’ny fikarakarana ny zanany sy niezaka mafy nijery ny hoavin’ny taranaka na mafy aza ny niainana tanaty fihibohana.
LMA Ampefiloha Nisy mpiadina teknika diso lalana tonga tao an-toerana
Mpiadina hiatrika ny fanadinana Bakalôrea teknika vitsivitsy diso toerana no tonga tao amin’ny foibem-panadinana LMA Ampefiloha omaly maraina.
Sekoly ambony tsy miankina Nahenan’ny fanjakana ny hetra aloany
Raha nisy ireo tena lasibatra indrindra nandritra ny fihibohana nateraky ny valan’aretina Covid 19 dia lohalaharana amin’izany ny sekoly tsy miankina.
Fanapariahana laza adina sandoka Mpampianatra 1 sy mpianatra 3 nidoboka am-ponja
Nampidirina amponja vonjimaika ny sabotsy 17 oktobra lasa teo tokony ho tamin’ny 7ora sy sasany hariva ireo olona 4 voarohirohy ho nanaparitaka laza adina Bakalorea sandoka tany Antalaha, taorian’ny fiakarany fampanoavana.
Minisitra Assoumacou Béatrice “Aleo hiatrika fanadinana am-pitoniana ny mpianatra”
Anio, 19 oktobra, no hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea ireo mpiadina miiisa 164 338 manerana ny nosy.
tanterahin’ireo mpiadina miisa 1.559 manerana ny Nosy. Nanokatra ny laza adina tamim-pomba ôfisialy tetsy amin’ny lisea teknika Ampefiloha Atoa Tsikel’Iankina Ernest, Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa. Nirary soa sy nitso-drano ireo mpanala fanadinana izy nandritra izany no sady nanafatrafatra ny amin’ny tokony hanajana hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra hisorohana ny mety ho fiparitahan’ny valan’aretina Covid 19.Marihana fa miisa 1.283 ireo mpiadina miatrika ny CAP ary 276 kosa ny miatrika ny CFA izay nitsinjara tamina ivon-toeram-panadinana miisa 49. Mitovy avokoa ny laza adina manerana ny Nosy ary ireo fandaharam-pianarana vita ihany no hanadinana. Na izany aza hoy ny Ministra dia efa vita hatrany amin’ny 90 % ny fandaharam-pianarana na ho an’ny sekolim-panjakana izany na ho an’ny tsy miankina. Haharitra efatra andro ny fanadinana CAP raha telo andro kosa ny CFA.